Mpamatsy & Ozinina Hydraulic Piston Pump | China Hydraulic Piston Pump Manufacturers
Fampiharana saha: ampinga milina indostria Fampidirana vokatra: ● Heavy-adidy feno amin'ny alalan'ny shaft lehibe-fanilihana andian-dahatsoratra paompy mba hanatrarana ny hafainganam-pandeha ambony ● Ampitomboy ny famokarana haingana sy hampihenana ny fandaniana ● Avo azo itokisana, avo fanerena sy ny androm-piainany mba hihaona amin'ny fepetra avo. - faran'ny fitaovana lehibe
Faritry ny fampiharana: fampiharana haingam-pandeha sy azo itokisana toy ny milina fanorenana, fitaovana an-dranomasina, ary fiara mandehandeha. Fampidirana vokatra: ◆ mavesatra axial piston paompy, avo-henjana casing sy integral swing swash lovia, ampiasaina ho an'ny avo azo itokisana misokatra hydraulic fitaovana; ► Paompy herinaratra tsy tapaka amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta, mety amin'ny fitaovana hydraulic haingam-pandeha avo lenta; ► Haingam-pandeha ambony kokoa, mety amin'ny fiarandalamby haingam-pandeha amin'ny motera diesel; ► Naorina...
Faritra fampiharana: fampiharana haingana sy azo itokisana avo lenta toy ny fitaovana fananganana fitaovana, metallurgy vy, rafitra hydraulic, sns. Fampidirana vokatra: ◆ Natao manokana ho an'ny fiara hydraulika misokatra, fanaraha-maso lavitra. ► Ny fikorianan'ny paompy dia mifandanja amin'ny hafainganam-pandeha sy ny fifindran'ny paompy, ary ny fifindran'ny paompy dia azo amboarina tsikelikely amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny fironany amin'ny takelaka swash. ► Feo ambany, fiainana lava, famolavolana modular. ► Ny rafitra through-shaft dia afaka mamorona com ...
Fampiharana faritra: Forging milina fanerena sy haingana forging milina, extrusion milina fanariana maty sy ny fotoana maharitra raikitra fikorianan'ny vokatra. Fampidirana ny vokatra: ► Paompy piston axial mavesatra, casing avo lenta ary takelaka swing swash, ampiasaina amin'ny fitaovana hidradrika misokatra azo itokisana; ► paompy quantitative, fifindran-toerana lehibe, plunger axial misy firafitry ny takelaka swash, ampiasaina amin'ny fifindran'ny hydrostatic amin'ny faritra misokatra; ► Ny alalan'ny shaft dia mampita 100% Torque, ary afaka ...
Fampiharana saha: Mitovy ny haben'ny fametrahana sy ny fanaraha-maso, manolo mivantana 100% ny paompy andiany voalohany "Visa" PVX, ary manolo ny paompy hafa nafarana, mampihena ny lisitry ny mpanjifa, mampihena ny vidiny ary manatsara ny fahatokisana. Fampidirana vokatra: ◆ manolo mivantana ny paompy andiany "Weiss" PVX voalohany, 100% azo ampiasaina; ► Amin'ny alàlan'ny shaft dia mandefa torque 100%, azo atambatra amin'ny paompy amin'ny andiany; ► Famolavolana rafitra tsy manam-paharoa, tsy mila ...
Fampiharana saha: ampinga milina indostria Fampidirana vokatra: ►Electric proportional mihidy fanaraha-maso, mety ho ambony fepetra ►High tsindry sy mavesatra entana, avo azo itokisana, lehibe fifindran-toerana, mahafeno ny fepetra takian'ny milina ampinga ►Full-amin'ny alalan'ny shaft, afaka mahatsapa andian-dahatsoratra paompy, mampihena vidin'ny
Faritra fampiharana: Mitaky fanaraha-maso lavitra ny fifindran'ny maotera, fanaraha-maso ny hafainganam-pandeha tsy hita maso. Fampidirana vokatra: ◆Through-shaft miovaova piston maotera, avo-henjana trano sy integral swing swash takelaka, natao manokana ho an'ny hydrostatic fifindran'ny amin'ny misokatra sy mihidy faritra menaka, miovaova fikorianan'ny dia mitovy amin'ny hafainganam-pandeha, mety ho miovaova hafainganam-pandeha fiara; ► Môtô mandrindra ny hafainganam-pandeha, fehezin'ny elektronika hanitsy ny zoro amin'ny takelaka swash, ary ny hafainganam-pandehan'ny vokatra ...
Sahan'ny fampiharana: indostrian'ny forging, indostrian'ny milina solika, indostrian'ny metallurgical, indostrian'ny taratasy, sns. Fampidirana vokatra: ◆ Natao manokana ho an'ny fiara hidraulika misokatra. ► Ny fikorianan'ny paompy dia mifandanja amin'ny hafainganam-pandeha sy ny fifindran'ny paompy, ary ny fifindran'ny paompy dia azo amboarina tsikelikely amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny fironany amin'ny takelaka swash. ► Paompy mahatsikaritra entana, mety amin'ny fotoana izay ilain'ny rafitra hydraulic; ► Axial plunger paompy miaraka amin'ny swash plate design,...
Faritra fampiharana: fampiharana indostrialy, fotoana mitaky fanaraha-maso ny tsindry. Fampidirana ny vokatra: ◆ Paompy piston axial mavesatra, akorandriaka henjana ary vilia swash, ampiasaina amin'ny fitaovana hydraulika misokatra azo itokisana; Axial piston paompy miaraka amin'ny swash takelaka famolavolana, fiaramanidina fizarana; ► Amin'ny alàlan'ny fifindran'ny shaft, ny paompy eo anoloana sy aoriana dia azo ampifandraisina amin'ny andian-dahatsoratra ► Ny feo ambany, ny vatana paompy tsara indrindra amin'ny FEM ary ny fametrahana efitrano mialoha ny famatrarana dia mampihena ny haavon'ny tabataba; ► Fiaraha-miova lehibe...
Fampiharana saha: milina fanorenana Fampidirana vokatra: ►Mety ho an'ny milina fanorenana sy ny fampiharana indostrialy. ►Wide miovaova isan-karazany fanaraha-maso dia afaka mahafeno ny fepetra ny hafainganam-pandeha ambony sy ny torsi lehibe. ►Motera fanodinkodinana miovaova ny famolavolana shaft, mety amin'ny faritra misokatra sy mihidy entin'ny tsindry hydrostatic.
B1-300 Motor kintana dimy
Faritra fampiharana: milina fandoroana tsindrona, milina fanandratana rotary hydraulika, milina eny an-dalana, fiara manala lanezy ary sehatra hafa. Fampidirana vokatra: ◆ Low-speed high-torque maotera, tsy misy rafitra tsorakazo mampifandray, ny fiara ampahany dia eccentric spherical mpivady, tsy misy lateral hery; ► Fizarana menaka voalanjalanja sy tambin-karama, azo itokisana; ► Ny fahombiazan'ny fanombohana dia avo 90%, ary ny fahombiazan'ny volumetric sy ny fahombiazan'ny mekanika dia avo; ► Ny hafainganam-pandeha ambany indrindra dia 0.5 ~ 1 ...
Motor hydraulic A6VM80 A6VM107 A6VM160 A6VM200 A6VM250 Rexroth A6VM
A6VM Hydraulic Piston Complete Motor A6VM80 A6VM107 A6VM160 A6VM200 A6VM250 miaraka amin'ny vondrona rotary piston axial amin'ny famolavolana axis miondrika, ho an'ny fiara hydrostatic amin'ny faritra misokatra sy mihidy. Ho an'ny HD, HA, HZ, EP Controller Ny maotera dia mety amin'ny fampiharana finday sy indostrialy. Vg max to Vg min = 0. Ny hafainganam-pandehan'ny famoahana dia mifandanja...